Rising Sun Pictures မှ VFX Magic ကိုတရုတ် Blockbuster အတွက်“ တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ” အတွက်ဖြစ်စေသည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တရုတ် Blockbuster များအတွက် Rising Sun ကရုပ်ပုံများ Conjures VFX ကို Magic "တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား"
Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ- ခြောက်လ spanning စီမံကိန်းများတွင် Rising Sun ကရုပ်ပုံများများအတွက် 86 အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရိုက်ချက်များထုတ်လုပ် တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလားယခုနှစ်ရဲ့ရှန်ဟိုင်းနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကြီးကျယ်ခမ်းနားမှပွဲထွက်ခဲ့ပြီးနှင့်နိုင်ငံတကာလွှတ်ပေးရန်အတွက်လက်ရှိကြောင်း, သစ်ကိုစိတ်ကူးယဉ်စွန့်စားမှုရုပ်ရှင်။ အဆိုပါအလုပျစတူဒီယိုရဲ့ core အားသာချက်၏အစအဆုံးအကုန်ပေါ်ဆွဲငင်ပြီးကဒ်-ကစားသတ္တဝါကနေ loopy အိပ်မက် sequence ကိုတစ်ဦးစိတ်ကို-မှုတ်ကားတစ်စီး Chase နှင့်တစ်ဦးသုန်မှုန်သူရဲကောင်းရိုက်ချက်မှအရာအားလုံးပါဝင်သည် "Destiny" ဟုအဆိုပါ hulk ကုန်တင်-လှည့်-floating ရုပ်ရှင်၏အဓိကတည်နေရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်း -casino ။
Shanghai Ruyi Film & TV Production Co. , Ltd, Shanghai Huolongguo Film & TV Production Co. , Ltd မှထုတ်လုပ်သည်။ Beijing Enlight Pictures မှဖြန့်ဝေပြီးရန်ဟန် (Away Go မစ္စတာကင်ဆာ), တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား Nobuyuki Fukumoto ရဲ့ manga ကိုအပေါ်အခြေခံသည် အဆုံးစွန် Survivor Kaiji။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် Zheng Kaisi (Li Yi Feng) အမည်ရှိလူငယ်တစ် ဦး အကြောင်းရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်အန္တရာယ်ရှိသည့် impresario (မိုက်ကယ်ဒေါက်ဂလပ်စ်) မှဖွင့်လှစ်ထားသောလောင်းကစားသင်္ဘောပေါ်တွင်ပိတ်မိနေပြီးအကြမ်းဖက်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသည်။
တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် RSP ရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကစီမံကိန်းတစ်ခုမှတ်သား။ အဆိုပါစတူဒီယိုယန်ဟန်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီ, BangBang Productions ထုတ်လုပ်မှု Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူးဆရာယောဟနျ Dietz, Jiang ဝမ်ရဲ့အပါအဝင်တရုတ်ထားအများအပြားမကြာသေးမီရုပ်ရှင်များအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုထောက်ခံမှုပေးထား အဆိုပါကျည်ဆန်နှင့်အတူ GoneSun, Zhou ရဲ့ မဖြစ်နိုင်သော နှင့်ယောဟန်ဝူးရဲ့ လက်ဝါးကားတိုင်.
"BangBang နဲ့ကျွန်မ Rising Sun ကရုပ်ပုံများနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်အတူရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယဖြစ်ပါတယ်" ဟု Dietz ကပြောပါတယ်။ "ယန်ဟန်အထူးသဖြင့်အပေါ် RSP ရဲ့မယုံနိုင်စရာအလုပ်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည် X-Men: အနာဂတ်အတိတ်၏နေ့ရက်များ နှင့်သော့ချက်ပာသို့ကြောင့်အခွက်တဆယ်ကိုရောက်စေဖို့လိုခငျြ တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား။ RSP ကိုထပ်ခြွင်းချက်အလုပ်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ကျနော်တို့ရလဒ်နှင့်အတူဝမ်းသာပီတိနေကြတယ်။ "
ဘာသာစကားကွဲပြားမှုနှင့် RSP နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်ထုတ်လုပ်မှုခွဲထုတ်သည့်ပထဝီအကွာအဝေးနေသော်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာနေပါတယ် "ဟု RSP အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Gill Howe ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကရှည်လျားအကွာအဝေးကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုသောပါတယ်။ ကျနော်တို့အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်အခြေစိုက်ဘဏ်ဍာကိုပြုသဖြင့်သကဲ့သို့, cineSync နှင့် Skype ကိုကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအသင်းနှင့်အတူဆက်သွယ်။ ဒါကအဖွဲ့နှင့်အတူအညီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အံ့သြဖွယ်ပုံရိပ်ယောင်များဖန်တီးနိုင်ရဖို့သေချာ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ'' s ကိုရူပါရုံကို။ "
ရုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးပာတစ်ခုမှာ Kaiji တစ် BMW ကား Coupe ကားမောင်းတဲ့လူစည်ကားမြို့မှတဆင့်ဆိုင်ကယ်ပေါ်နင်ဂျာများက လိုက်. သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပီပီကားတစ်စီး Chase ဖြစ်ပါတယ်။ RSP အဆိုပါလိုက်စားစာသားထိန်းချုပ်မှုထဲကလည်နေတဲ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အမှုအရာအထဲသို့ဝင်သောရှိရာ sequence ကိုများ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည်။ "အဲဒီမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေအများကြီး ... ကားများ, ဝင်တိုက်ခြင်း, သေနတ်သံ, ပေါက်ကွဲမှုအရှိန် ... င်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကတတ်နိုင်သမျှအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များကိုကြည့်စေခဲ့," RSP Visual Effects ကြီးကြပ်ရေးမှူး Malt Sarnes ပြန်ပြောပြသည်။ "ဒါဟာအများစုဟာလက်တွေ့ရိုက်ကူးဖို့ဝေးလွန်းအန္တရာယ်ကြီးထို့ကြောင့်ဆိုင်ကယ်, ထိုသူရဲကောင်းကားတစ်စီးနှင့်အခြားယာဉ်များ CG ၌ပြစ်မှားမိကြရသည်။ "
အဆိုပါစတူဒီယိုရဲ့ 3D အဖွဲ့က BMW ကားများ၏ CG မော်ဒယ်များ, ထိုဆိုင်ကယ်နှင့်ကမီးတောက်ထဲမှာပေါက်ကွဲစေခြင်း, စက်ဘီးတဦးနှင့်အတူတိုက်မိကြောင်းထရပ်ကားအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားမော်တော်ယာဉ်များ, ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်ယာဉ်များလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့် CG element တွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင်နိုင်အောင် tiniest အသေးစိတ်ဆင်းဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်စေခဲ့ရသည်။ "သူကအရင်ကပျက်စီးခြင်းနှင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာဖြစ်စဉ်များအဖြစ်အပိုဆောင်းချိုနှင့်ခြစ်ကြုံတွေ့နေကြရသည်ခဲ့သောကြောင့်သူရဲကောင်းမော်တော်ယာဉ်စိန်ခေါ်မှုပဲ" ဟု CG ကြီးကြပ်ရေးမှူးရိုင်ယန် Kirby ကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါကားများအားလုံးသတ္တုဖြစ်ကြပြီးရှေ့မီး, taillights နှင့်ရော်ဘာတာယာရှိသည်ကြောင့်အဆိုပါမသမာမှုများနှငရိပ်လည်းအတော်လေးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါစတူဒီယိုရဲ့ 2D အသင်းနောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်သို့ CG ယာဉ်များအားမရနဲ့ (BMW ကားများ၏ကားရှေ့မှနျမှတဆင့် crash ဖြစ်သောသူတစ်ဦးနင်ဂျာအပါအဝင်) အစိမ်းရောင် screen ပေါ်မှာသီးခြားစီပစ်ခတ်ခဲ့သောသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့တန့်အခွက်တဆယ်ထည့်သွင်း၎င်း၏နောက်ဆုံးပုံစံသို့မြင်ကွင်းတစ်ခုစုဝေးရောက်လာကြ၏။ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုနည်းနည်းပုမီလီစက္ကန့မှ choreographed ခဲ့သည်။ Pyrotechnics နှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ယ်ကမပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ထိတွေ့ထောက်ပံ့။ "ကျနော်တို့ကသွား၏မီးစများ၌၎င်း, မီးခိုး, ပေါက်ကွဲမှု ... ယောဟန်သည် Dietz ကကြီးကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အပိုအနည်းငယ်တစ်ခုခုပေါင်းထည့်နိုင်လေရာရာ၌" 2D ခဲ Jesse Burnheim မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ရုပ်ရှင်ရဲ့ပုံရိပ်ယောင်များထဲကအတော်များများဟာ hallucinatory အရည်အသွေးကိုရှိသည်။ (မျက်နှာပြင်အချိန် 90 စက္ကန့်ထက်ပို၎င်းပြင်) RSP အရှည်ဆုံး sequence ကိုခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဟာစိတ်ပျက်အားငယ် Kaisi အဆိုပါလောင်းကစားရုံတစ်တံခါးကိုမှတဆင့် wanders နှင့်ရုတ်တရက်ကိုယ်တော်တိုင်အာကာသအတွင်းဖရိုဖရဲတွေ့။ သူဟာဧရာမငါးမန်းများကတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိလေယာဉ်ဆင်းသက်မတိုင်မီမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနေတဲ့လက်သည်းကဲ့သို့ patch ကို၏လက်တွင်းမှတဆင့်ကျရောက်ပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာဥသုံကျော်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးသောအခါသူမှသာငါး၏မေးရိုးကနေကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။
Kaisi မှလွဲ. အခင်းဖြစ်ပွားရာ၌ရှိသမျှကို CG ဖြစ်ပါတယ်။ "ယန်ဟန်ကတစ်ချိန်တည်းမှာ trippy နှင့် creepy ခံစားရလို" Sarnes ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကသူ့ကိုနှင့်ယောဟန် Dietz နှင့်အတူအများကြီးကြားမှာရှောက်သွားလေ၏။ ဒါပုဂ္ဂလဒိဋ္င်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသည်သေံရုံပိုင်ခွင့်ရဖို့ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံးစိန်ခေါ်မှုနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်အများဆုံးပျော်စရာ, မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပဲ။ "
အခင်းဖြစ်ပွားရာ Choreographing နှစ်ဦးစလုံးအနုပညာနှင့်နည်းပညာပိုင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်, Kirby ကထပ်ပြောသည်။ "Kaisi လေးအရူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြတ်သန်းအဖြစ်တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းကင်မရာပြောင်းရွှေ့အပြည့်အဝ 90 စက္ကန့်ဘို့အထောကျနေသည်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကစင်္ကြံတစ်ဦးအေးခဲမျက်ရည်စက်လေးတွေပြန်ထဲသို့ရေထဲသို့, အာကာသသို့စင်္ကြံကနေသွားပါ။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသနှင့်ပြောင်းလဲစကေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌စိန်ခေါ်မှုပဲ။ "
နီးပါးရှုပ်ထွေးသည်အတိုင်း, ရုပ်ရှင်၏အဖွင့်မှာပေါ်လာမည့် Destiny တစ်ခုအပြင်ပန်းအမြင်ပတျသကျတဲ့ sequence ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်သမုဒ္ဒရာပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ဦးစလုံး CG ဖန်တီးမှုဖြစ်ကြသည်။ "ဒီသင်္ဘောဟာလောင်းကစားရုံအသွင်ပြောင်းခဲ့ဓာတုရေနံတင်သင်္ဘောဖြစ်ပေါ်လာသော" Sarnes ကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းကိုအောက်တွင်ပေါ်သွားနေချိန်မှာကုန်းပတ်ပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်လျှို့ဝှက်စစ်ရေးပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ "
အဆိုတော်များသင်္ဘော, မိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အသေးစိတျ honing လနေခဲ့ရသည်။ Burnheim အဆိုပါ sequence ကို၏အရှည်နှင့်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအသေးစိတ်ညာဘက်ရဖို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်စေမှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဒီပရိသတ်ကိုအလုပျစိစစ်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးရှိပြီးတစ်ခုခုမှားယွင်းသောကြည့်လျှင်, သူတို့သည်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသရုပ်မှန်တစ်ခုတိုးချဲ့အသိပေးဖို့, နောက်ခံမီးခိုး wisps, မီးတောက်နှင့်အလင်းအိမ်ဖြည့်စွက်, လှည့်ကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်၌ရှိသမျှကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ "
RSP ရဲ့ဇာတ်ကောင် Animation Hightower ဟုခေါ်သောသတ္တဝါပတျသကျတဲ့ sequence ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှုကြွက်သားကွေးတယ်။ တခြားနေရာရုပ်ရှင်ထဲမှာ, အရပ်ရှည်ရှည်, ကဲ့သို့သောသတ္တဝါဆိုးသူရဲအဖြစ်ပုံဖော်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာသူတို့ကဒ်များဂိမ်းတစ်ခုကျော်လျှော့ပေါ့အဆိုပါလောင်းကစားရုံ၌ထိုင်။ "ကျနော်တို့ကလက်အားပေးရနျကြှနျုပျတို့၏ sequence ကိုများအတွက်သတ္တဝါပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့," Kirby ကရှင်းပြသည်။ "ဒါဟာ high-definition ကြွက်သားခြင်း simulation လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ကင်မရာကိုသူတို့ကိုဒီတော့နီးစပ်ခဲ့သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်တက်ခြစ်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစနည်းနည်းပိုပြီးပြုမူ, ပင်နည်းနည်းရီစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ "
Sarnes အဆိုပါ sequence ကို RSP ရဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်အလုပ်အကြားအဆင့်ကပြောပါတယ်။ "သင်ကြီးတွေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမြင်သောအခါ, သင်အနုပညာရှင်တွေအက္ခရာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံအချိန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ပါတယ်" ဟုသူကမှတ်ချက်ချတယ်။
အားလုံးအတွက်, RSP ရုပ်ရှင်၌ခုနစ်သော့ချက်ပာဖို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ စုပေါင်း, ထိုအပြည့်အဝဖြစ်စေအပြည့်အဝသို့မဟုတ်နီးပါး CG ဖွစျကွောငျးပစ္စည်းနီးပါးကိုးမိနစ်ပမာဏ။ Howe အလုပ်၏အတိုင်းအတာများနှင့်အမျိုးမျိုးကြောင့်မြေတပြင်လုံးအသင်းများအတွက်ဝမ်းမြောက်စေပြီးစီမံကိန်းကိုလုပ်သူကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့သတ္တဝါကာတွန်းလုပ်ပေးဝေးထွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးစိတ်ဝင်စားဖို့သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်တယ်" ဟုသူမကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာကျွန်တော်မှာ excel အပေါငျးတို့သဒေသများထိမိခြင်းနှင့်ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျသညျအဘယျသို့ပွဖို့အဘို့ကြီးသောအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ "
Rising Sun Pictures (RSP) တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိစတူဒီယိုများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများကိုဖန်တီးသည်။ ထူးခြားသောပုံရိပ်များဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအသင်း၏ဗဟိုတွင်မတူကွဲပြားသောဗဟုသုတများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်။ ၎င်းသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဓိကအားဖြင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအချို့ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းရည်များရှိသည်။ RSP သည် Tomb Raider၊ Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-Men Harry Potter နှင့် Hunger Games ဂိမ်းများ၊ Game of Thrones စသည့်ရုပ်ရှင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
ကာတွန်း လှံနှင့်မြှား က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects 2018-06-29
ယခင်: အစည်းအရုံး Paddlesurf ပညာရှင်များ၏ World Tour Blackmagic ဒီဇိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: Turner အာရှပစိဖိတ် Ooyala အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး, စုစည်းခြင်းနှင့် Delivery